Topographic map: njirimara, njirimara na ojiji | Netwọk Mgbasa Ozi
Abụọ maka ndị ọkachamara na ụdị mmadụ ọ bụla, a topographic map ọ bụ nnukwu ngwaọrụ. Ma ọ bụ na ọ bụ ụdị map nke ojiji ya dị oke oke yana maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ma na sayensị ma na atụmatụ gbasara ohere. Ihe ndị bụ isi bara uru maka ọtụtụ ndị.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị njirimara niile, ngwa ọrụ na nnukwu ozi enwere ike ịnweta site na map topographic.
2 Ihe nke topographic map
3 Nkọwa nke ihe ndị dị na map topographic
4 Isi ojiji
Maapu elu ala bu ihe ngosiputa nke enyemaka nke elu ala. Ihe kachasị mma bụ na ọ bụ ihe nnọchianya nke ihe emere site n'otu mpaghara. Buru n'uche na a na-anọchi anya mpaghara a n'ọtụtụ. Isi ihe dị iche na atụmatụ topographic bụ nke ahụ ebe a na-egosi m onwe m karịa. N'oge ụfọdụ, enwere ike ịmepụta eserese onodu ala nke ógbè, ógbè, na ọbụna mba na kọntinent.
Usoro akara nke topographic map bụ akụkụ dị mkpa nke ụdị map ọ bụla. Site na eriri elekere, ọ ga-ekwe omume ịmata ọdịdị nke ụwa na ọchịchọ ya. Na ụdị eserese a ka eji akara ngosi di iche iche nke ha ji amata ihe di iche. Ekele maka akara na agba ndị a niile osimiri, ugwu, ndagwurugwu na atụmatụ ndị ọzọ na ihe ndị dị na mbara ala.
Map ndị dị n'elu ala gụnyere ọtụtụ ozi bara uru banyere obodo, okporo ụzọ, àkwà mmiri, mmiri mgbochi, ihe owuwu mmadụ ma ọ bụ eriri ọkụ, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Taa, e nwere ọtụtụ ndị nkwusa na ọrụ ọha na eze na-enye map ala. Dabere na ụlọ ọrụ ma ọ bụ onye mbipụta akwụkwọ, ha nwere ike ịbụ eserese ngosipụta oke oke mpaghara mpaghara ụfọdụ.
Ihe nke topographic map
Ka anyị lee ihe bụ isi ihe dị na map topographic kwesịrị ịgụnye. Iji tụlee ya dị ka ndị dị otú a, a ga-etinye ọtụtụ ihe n'ụzọ iwu chọrọ. Anyị ga-ahụ nke bụ isi na isi ihe dị mkpa kwesịrị igosi na map ọ bụla ọ bụla:
Ọnụ ọgụgụ ejirila.
Ntuziaka nke ala ebe ugwu
Uzo nke magnetik ugwu
Ihe akara niile ejiri
Mmekọrịta dị na ụgbọ elu ndị ọzọ
Onye edemede nke maapụ ma ọ bụ nzukọ nke kere ya
Ihe ndị a bụ isi ihe anaghị ada ada na maapụ elu elu. Anyị maara na a na-achịkọta ọtụtụ ozi na ụdị eserese a. Olileanya, ozi niile a kwesịrị ịghọta nke ọma. Anyị ga-achịkọta isi okwu iji chebara ụdị ozi enwere ike ịnweta site na eserese ndị a:
Ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na ụlọ ndị dịpụrụ adịpụ. Na topographic map, enwere ike inweta ihe omuma banyere ebe ndi mmadu di ugbua na otu mpaghara na ulo nile kachasi anya site na obodo mepere emepe.
Ofzọ nkwukọrịta. E kewara ụzọ nkwukọrịta a n'okporo ụzọ, okporo ụzọ, ụzọ ụgbọ oloko, wdg.
Mmiri mmiri. O metụtara mmiri ma ọ bụ ọnụnọ nke osimiri, ọdọ mmiri, ọdọ mmiri, wdg.
Ha bụ ahaghị mbara ala ahụ na elu ebe ebe ndị a na-anọchite anya ya na map dị.
Ngalaba nchịkwa nke ókèala. Ọ bụghị naanị ókèala ka egosiri, kamakwa ndị nchịkwa.
Ahịhịa. Emeghị ndepụta zuru ezu nke ụdị osisi ndị dị, kama ọ bụ ụdị ndị bụ isi.
Nnenna Ha dị mkpa maka ọnọdụ nke ebe ndị ahụ nọchiri anya ha.
Nkọwa nke ihe ndị dị na map topographic
Anyị ga-akọwa n'uju nkọwa nke bụ ihe ndị dị na map topographic.
Ọkwa ọkwa: bụ ndị na-ahụ maka igosi ugwu nke mbara ala. Ha bụ ihe nnọchianya kachasị nke ụdị map a. A na-ahụta ihe ndị a na-esite na ha n'otu isi dị elu karịa oke osimiri. Yabụ, ha ga-abụ isi iyi ndị nwere ebe ndị yiri ha.
Ochie akara: Na mgbakwunye na usoro akara, a na-egosiputa nnukwu ozi. E gosipụtara ozi a niile site na akara na akara iji gosipụta osimiri, obodo ndị mepere emepe ma ọ bụ isi ihe mmasị. A na-ejikwa agba dị iche iche arụ ọrụ dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, a na-ejikarị agba aja aja na-egosi ebe dị elu. A na-eji Green egosi mpaghara oke ọhịa ma ọ bụ nnukwu ahịhịa ndụ na-acha anụnụ anụnụ iji gosi mmiri. Roadsfọdụ ụzọ na ụzọ dị iche iche nke ọma na agba ndị ọzọ.
Ihe nlele a na-eji elu dị n'etiti akara akara abụọ na ụdị maapụ a. A maara nke a dị ka equidistance. Iji hụ ọdịiche dị na elu ugwu n'ụzọ doro anya karị, a na-eji ahịrị ahịrị toro eto ọ bụla usoro ntụgharị 4-5 akpọrọ isi eriri. A na-eji ya iji gosipụta ịdị elu na iji gbakọọ equidistance ka mma.
Akara: anyị maara na a na-anọchite anya eziokwu na ụdị map ọ bụla. N'ụzọ doro anya, ọ bụghị ụdị ihe na ihe niile nwere ike ịnọchite anya ha. Ya mere, a na-etinye ọnụ ọgụgụ ahụ. Ihe a na-ejikarị eme ihe bụ 1: 50.000. Nke a na-agwa anyị na otu ihe dị na map ahụ bụ nkeji 50.000 n'ezie. Dịka ọmụmaatụ, centimita abụọ na map ga-abụ otu kilomita na eziokwu.
Na-echere: Ndagide bu nmekorita nke di n’etiti enweghi nsogbu nke anyi gha emeriri na ebe di anya nke di n’elu ya.
Anyị ga-ahụ ihe bụ isi eji enyere aka na map topographic. Ha nwere ike inwe otutu ihe eji eme ya ma onye ọ bụla nwere ike iji ya mee ọtụtụ ebumnuche yana obi iru ala. Ihe ndị a na-ejikarị eme ihe bụ:
Gba ọsọ na oge ezumike ndị ọzọ
Site na ụdị eserese ndị a, a na-ahazi sistemụ ozi ala site na iji teknụzụ. Usoro ndị a na-achịkọta ọtụtụ ozi dị n'ụdị nke na-emezi ka ị mata ọtụtụ ozi gbasara otu ebe. Iji maa atụ, ala jiri otu mpaghara.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere map topographic na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Topographic maapụ